Thatha Ikhefu | Martech Zone
NgoLwesibili, Novemba 13, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 UJenn Lisak Golding
Angazi ngawe, kepha ukuba semkhakheni wezobuchwepheshe bokumaketha kuhlala kunami phambi kwekhompyutha noma etafuleni lami. Ngokusobala, lokho akukuhle kakhulu emizimbeni yethu, ngokusho kocwaningo olwenziwe yiLearnstuff.com.
Abantu ngokuvamile bacwayiza cishe izikhathi eziyi-18 ngomzuzu. Kepha uma ubuka esikrinini sekhompyutha, ulungele ukucwayiza izikhathi ezingaba ngu-7, okungaholela kuComputer Vision Syndrome. Abantu abayi-9 kwabangu-10 abachitha amahora angaphezu kwama-2 aqhubekayo bebuka esikrinini sekhompyutha, futhi ukusebenzisa igundane amahora angaphezu kwama-20 ngesonto kukhulisa ubungozi be-carpal tunnel syndrome ngo-200%. Sekukonke, kubukeka njengokugqolozela esikrinini sekhompyutha AKULUNGILE empilweni yethu.
Kepha ukuthatha ikhefu kungasiza kakhulu ukulala kwethu, amehlo, imihlane, nesimo sonke. Bheka eminye imininingwane ngale infographic epholile ukuthi ungayivikela kanjani impilo yakho lapho usebenza kukhompyutha usuku lonke!
Tags: ComputerIComputer Vision SyndromeDeskscreenPhumula
Nov 13, 2012 ngo-10: 15 AM
Jan 18, 2013 ngo-1: 26 PM
Sawubona jenn, ngiyazi ukuthi lolu hlobo lucishiwe lapha, kepha ngicela ukwazi ukuthi ngubani ongumfanekiso we-infograph walokhu kungena? Ngibonga kakhulu !
Jan 18, 2013 ngo-3: 43 PM
Kuzofanele ubheke abantu kwaLearnstuff @tanxiuwen: disqus! Bashicilele i-infographic - futhi benza umsebenzi omuhle!